कुन राशिले कसरी गर्ने प्रेम?
Topic: कुन राशिले कसरी गर्ने प्रेम?
Author Topic: कुन राशिले कसरी गर्ने प्रेम? (Read 4609 times)
« on: July 21, 2016, 01:08:51 AM »
मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्दा बिहानको समय रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। धेरैजसो युवा बेलुकीपख प्रेम प्रस्ताव राख्छन्। यो मेष राशिका लागि लाभदायक हुँदैन। मेष राशि सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले सूर्योदयसँगै प्रेम प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्ने निहुँले भेट्नु दुवैका लागि राम्रो हुन्छ। सूर्योदयका बेला दुवैजना आ-आफ्नो घरमा हुने भएकाले त्यही बेला भेट्न असम्भव भएको अवस्थामा फेसबुक वा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट प्रपोज गरे पनि हुन्छ। यो राशि भएका व्यक्तिहरूको लेखाइभन्दा बोली बढी प्रभावकारी हुने भएकाले म्यासेजभन्दा बोलीको प्रयोग गर्नु बढी हितकर मानिन्छ।
नोटः मेष राशि भएका व्यक्तिले आफ्नो प्रेमिलाइ भेट्न जाँदा कुनै पनि साधन प्रयोग नगर्नु नै लाभदायक हुन्छ।
जुन मान्छेको राशी मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशी हुने हरु सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । मेष राशी हुने मानिसको लागि कुम्भ, तुला या मिथुन राशी हुने साथी सामान्य रहन्छन् । यीनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । वृष, कन्या या मकर राशी हुने मानिसकासँग मेष राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ ।
मेष राशी हुने मानिसको लागि वृश्चिक, मीन या कर्कट राशीका साथी उत्तम मानिँदैन । यीनीहरुका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफलहुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ ।
Re: कुन राशिले कसरी गर्ने प्रेम?
« Reply #1 on: July 21, 2016, 01:09:58 AM »
यो राशिका लागि प्रेम गर्न सर्वाधिक उपयुक्त राशि कन्या हो। वृष राशिका व्यक्तिहरूले मिथुन, वृश्चिक तथा मकर राशिका व्यक्तिसँग पनि प्रेमसम्बन्ध अघि बढाउन सक्छन्। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूले सूर्य उदय भएको चार घण्टाभित्र प्रेम प्रस्ताव राखिसक्नुपर्छ। प्रेम भैसकेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो प्रेमिप्रति बिहान ६ बजेदेखि १० बजेभित्रमा प्रेम दर्साउनुपर्छ।
यो राशिका व्यक्तिहरूको बोलीको प्रभाव कम हुने भएकाले प्रत्यक्ष भेट्नुभन्दा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रपोज गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। फोनबाट प्रेम प्रस्ताव राख्दा पश्चिम दिशा फर्किएर छोटो-मीठो भाषा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रपोजपश्चात्को भेटमा प्रेमी वा प्रेमिकाले क्रिम कलरको पहिरन प्रयोग गर्न सक्छन्। यो राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो भ्यालेन्टाइनलाई पशुपन्छीहरूका चित्र वा मूर्ति उपहार दिनु राम्रो हुन्छ। भ्यालेन्टाइन कार्ड दिँदाचाहिँ चाँदी रंगको वा चाँदीका फ्रेम भएको उपहार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
रेस्टुराँ जाँदा गोलो आकारका गुलिया परिकार खानु उपयुक्त हुन्छ। यसले प्रेममा विश्वास जागृत गराउँछ। डेटिङ स्पटमा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण स्थानहरू उपयुक्त हुन्छन्। यो राशिका व्यक्तिले आफ्नो भ्यालेन्टाइनलाई माया व्यक्त गर्न बोलीभन्दा बढी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। किस गर्दा घाँटीको दायाँ-बायाँ गर्न सकिन्छ।
नोटः वृष राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रेमीलाई भेट गर्न जाने क्रममा अनाथ वा वद्धवृद्धाहरूको सेवा गरे योजना सकारात्मक रूपमा पूरा हुनेछ।
« Reply #2 on: July 21, 2016, 01:17:32 AM »
मिथुनः यो राशिको तुला राशिसँगको केमेस्ट्री उत्तम हुन्छ। यद्यपि यो राशिका व्यक्तिहरूको प्रेम धनु, वृष र मिन राशिसँग पनि राम्रो हुने देखिन्छ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्मको समयमा अथवा बेलुकी सूर्य अस्ताएपछि प्रेमप्रस्ताव राख्नु उत्तम हुन्छ। यो राशिका व्यक्तिले हरियो वा नीलो रङ्गका वस्त्रको प्रयोग गरी उत्तर फर्किएर सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्दै प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यो शैलीको प्रस्ताव उनीहरूको प्रेमीले रु चाउने देखिन्छ। यदि सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्दै प्रपोज गर्ने मन नभए सार्वजनिक ठाउँमा कुनै चित्रकला देखाएर अथवा कुनै सजावटी सामग्रीको माध्यमबाट पनि प्रपोज गरे सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यो राशिका व्यक्तिहरूको प्रभावकारिता नै सार्वजनिक स्थानमा हुने भएकाले यसो गर्नुपरेको हो। मिथुन राशिका व्यक्तिले उपहार दिँदा चलायमान, आवाज निस्कने, बत्ती बल्ने सामग्री दिए सजिलै आफ्नो प्रेमीलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ। भ्यालेन्टाइन कार्डचाहिँ रेक्ट्याङगुलर सेपमा नीलो मसीले लेखिएको हरियो कार्ड प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। खानेकुरामा पिरो र अमिलो परिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धमा मिठास आउँछ। डेटिङ स्पटका लागि मेला, सिनेमा हलजस्ता भरिभराउ स्थल वा फल फल्ने बगैंचा रोज्नु राम्रो हुन्छ। माया व्यक्त गर्दा दायाँ हातका औंलाहरूमा चुम्बन गर्दा प्रेम प्रगाढ हुन्छ।
नोटः मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न जाँदा घरको दैलोबाट आफ्नो दायाँ खुट्टालाई पहिले निकाले प्रेमप्रस्तावका बेला आउने बाधा-अवरोधहरू हटेर जानेछन्।
कर्कटः केही टेढो चाल चल्ने राशिका रूपमा चिनिने कर्कट राशिका लागि वृश्चिक राशि भएका व्यक्ति सर्वोत्तम हुन सावित हुनसक्छ। त्यसबाहेक मेष र कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रेम गर्दा फरक पर्दैन। यो राशिका व्यक्तिले सेतो, खैरो अथा नीलो रङ्गको वस्त्र लगाएर पूर्व दिशातर्फ र्फकंदै दुई अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरी प्रपोज गरे सकारात्मक उत्तर आउनेछ।
उपहार दिँदा पनि अनौठो आकार-प्रकारका जनावरहरूको मूर्ति अथवा अध्ययन सामग्री दिनु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी क्याल्कुलेटर, मोबाइल वा कम्प्युटर जस्ता उपहार पनि उपयुक्त हुन्छन्। यो राशिका व्यक्तिले भ्यालेन्टाइन कार्डका रूपमा खैरो गातामा भित्र गाढा रातो अक्षरले धेरै पृष्ठमा धेरै कुरा लेखिएका कार्ड दिनु सर्वोत्तम हुन्छ। खानेकुरामा शाकाहारी भोजनभन्दा मांसाहारी भोजन राम्रो मानिन्छ। डेटिङका लागि तलाउ, पोखरी तथा खोला, नदी वा जनावरहरू भएका स्थानमा जानु उत्तम हुन्छ। चुम्बन गर्ने हो भने टाढैबाट फ्लाइङ किस गर्नु प्रभावकारी हुनसक्छ।
नोटः आफ्नो प्रेमीलाई प्रपोज गर्दा छालाजन्य पर्स, बेल्ट एवं तिखा सामग्री बोकेर जानु राम्रो मानिँदैन।
सिंहः यो राशि भएका व्यक्तिका लागि मेष राशिसँगको प्रेम सर्वोत्तम हुन्छ। यद्यपि सिंह राशिका व्यक्तिको प्रेम सिंह राशिकै व्यक्तिसँग पनि सफल हुने देखिन्छ। सिंह राशिका व्यक्तिले प्रेम प्रस्ताव राख्दा मध्यान्ह १२ देखि ३ बजेसम्मको समय छान्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रेम प्रस्ताव इमेल वा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको सहायताले गर्नु फलदायी हुन्छ। यद्यपि इमेल वा सन्देश पठाउन भने १२ देखि ३ बजेबीचको समय नै छान्नुपर्छ। प्रेम प्रस्ताव राख्दा वा लेख्दा गाढा रातो, गाढा नीलो तथा गाढा सुन्तला रङ्गको पहिरन लगाएर दक्षिण दिशा र्फकनु उपयुक्त हुन्छ। भेटेरै प्रस्ताव राख्ने हो भने सैनिकझैं सिधा उभिएर आत्मविश्वासका साथ आँखामा आँखा जुधाएर प्रेमप्रस्ताव राख्नुपर्छ। उपहार दिँदा शिर ठाडो राखेर दिनुपर्छ। उपहार दिँदा धेरै गोजी भएका, धेरै चेन भएका, धेरै बटम भएका वा धेरै रंग प्रयोग भएका बाक्ला पहिरन छान्नु उत्तम हुन्छ। भ्यालेन्टाइन कार्ड पनि केही फरक हुनु आवश्यक छ। बाहिरी आवरणमा प्वाल तथा गाढा रातो गाता भएको कार्ड प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। भे टघाटपछि खाने परिकारमा चकलेट तथा केकजस्ता गुलिया र कोमल मिठाई खानुपर्छ। भे टघाटका लागि रेस्टुराँका रुफटपमा बस्नु वा अग्लो स्थानमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका स्थान रोज्नुपर्छ। आफ्नो प्रेमीलाई किस गर्ने हो भने ओठ उपयुक्त अङ्ग हुनसक्छ।
नोटः सिंह राशिका व्यक्तिहरूले प्रपोज गर्ने क्रममा आफ्नो शिर टोपी वा सलले अथवा अन्य कुनै कपडाले छोपे भाग्य वृद्धि हुँदै प्रेम अटुट रहन्छ।
कन्याः कन्या राशि भएका व्यक्ति कोमल हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले वृष राशि भएका व्यक्तिसँग सम्बन्ध बढाउनु राम्रो हुन्छ। कन्या राशिको संगत तुला, धनु तथा मिन राशिसँग हुँदा पनि प्रेमले सफलता पाउँछ। यो राशि भएका व्यक्तिले पे्रमप्रस्ताव राख्दा मध्याह्न ३ देखि साँझ ६ बजेको समय रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। चन्द्रमा र बुध ग्रहको प्रभावका कारण यी राशि भएकाहरूले हरियो वा सेतो रङ्गका वस्त्र धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफूलाई मन पर्ने रङ्गको कपडामा प्रेमका शब्दहरू लेखेर पश्चिम दिशा फर्किएर दिए प्रेम प्रस्ताव स्वीकार हुनसक्छ। उपहारका लागि काठले बनेका सामग्री दिनु प्रभावकारी हुन्छ। भ्यालेन्टाइन कार्ड दिँदा फुलबुट्टाले भरिपूर्ण भएका गातारहित कार्ड रोज्नु राम्रो हुन्छ। पे्रमप्रस्ताव राख्दा कमै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। बोल्नुपर्ने अवस्थामा सकेसम्म पश्चिम दिशातर्फ नै फर्किएको हुनुपर्छ। आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकालाई डिनर अथवा लन्च गराउने सोच छ भने आफ्नै हातले बनाएको अन्नको परिकार ख्वाउँदा प्रेमले प्रगाढ रूप लिन्छ। डेटिङका लागि फन पार्कजस्ता बालबालिका खेल्ने स्थान रोज्नु राम्रो हुन्छ। समय मिले वा प्रेम स्वीकृत भएको अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिलाई गालामा चुम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ।
नोटः कन्या राशि भएको व्यक्ति पुरुष भए रातो रङ्गको टीका निधारमा लगाएर डेटिङमा जानुपर्छ भने स्त्री भए रातो रङ्गको नेल पोलिस प्रयोग गर्नुपर्छ।
नोटः तुला राशि भएका व्यक्तिले थप सम्बन्ध विस्तार गर्न भने प्रत्येक दिन रातो माटोलाई दाँया हातको मुठ्ठीमा राखेर दक्षिण तर्फ र्फकनुपर्छ। एकछिन् मुठ्ठीमा बाँधेपछि उक्त माटो विसर्जन गर्नुपर्छ। यो कार्य नियमित गर्दा शरीर भित्र भएका नकारात्मक उर्जाहरू नष्ट हुन्छन्।
वृश्चिकः यो राशिका लागि कर्कट राशि उपयुक्त मानिन्छ। यसबाहेक सिंह र कन्या राशि भएका व्यक्तिसँग पनि वृश्चिक राशिको सम्बन्ध गाढा हुन सक्छ। गुलाबी र सेतो रङ्गको पहिरन लगाएर पूर्व दिशामा फर्किएर प्रेम प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यो राशि भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि माध्यम प्रयोग नगरी सीधै प्रस्ताव राख्न सक्छन्। प्रेम प्रस्ताव राख्ने समयका हकमा सूर्यास्त बढी प्रभावकारी हुन्छ। उपहारमा मनोरञ्जनका सामग्रीहरू दिनु राम्रो हुन्छ। भ्यालेन्टाइन कार्डका रूपमा सेलिब्रेटीहरूका तस्बिर छापिएका चम्किला सेता तथा गुलाबी गोलाकार कार्ड प्रयोग गर्दा सकारात्मक रूपमा ग्रहण हुन सक्छ। वृश्चिक राशिमा शुक्र ग्रहको प्रभावका कारण गुलिया पदार्थहरू मह र तरल पर्दाथहरूलाई चाँदीको भाडामा राखेर ख्वाए प्रेमी-प्रेमिकाको सोच सकारात्मक हुनेछ। डेटिङका रूपमा प्रियजनलाई फिल्महल, कन्सर् ट, पव, डिस्कोजस्ता ठाउँमा लान सकिन्छ। यस्ता स्थानमा जान मन नहुनेले आफ्नो भ्याले न्टाइनसँग गीत गाउने एवं गाउन लगाए सम्बन्धको डोरी बलियो हुन्छ। वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिले प्रियजनको दुवै आँखामा चुम्बन गर्नु राम्रो मानिन्छ।
नोटः वृश्चिक राशिका व्यक्तिले आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न जाँदा चाँदीले बनेका गहना प्रयोग गर्दा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ।
धनुः यो राशि आज्ञाकारी भएकाले कुम्भ राशिसँगको प्रेमसम्बन्ध निकै राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक मेष र सिंह राशि भएका व्यक्तिसँग अफेयर चलाउँदा पनि सकारात्मक परिणाम आउँछ। यस पटकको भ्यालेन्टाइन्स डे बिहिबार परेकाले यो राशिमा बृहस्पति ग्रहको प्रभाव पर्छ। फलस्वरूप यो दिन धनु राशिका व्यक्तिले जुनसुकै राशिका व्यक्तिसमक्ष प्रेम प्रस्ताव राख्दा त्यसको प्रभाव अन्य दिनको तुलनामा बढी हुन्छ। सूर्य अस्त हुने समयमा दक्षिण दिशातर्फ फर्किएर फोनका माध्यमबाट प्रेम प्रस्ताव राख्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। यो समयमा धनु राशिले पहेंलो रंगको कुनै एउटा पहिरन लगाएको हुनुपर्छ। यसरी प्रस्ताव राख्दा फोनलाई दुई हातले समाउनुपर्छ। यदि आफ्नो प्रेमप्रति निकै विश्वास छ भने आफ्नो प्रेमीको दुई हात समाएर झुकेको शीरले प्रेम प्रस्ताव राख्नुपर्छ। बाँस अथवा कागजले बनेका सामग्रीहरू उपहार दिँदा माया बढी प्रगाढ हुनेछ। यो राशि भएका व्यक्तिले भ्याले न्टाइन कार्डचाहिँ पहेलो रंगको गातामा रातो थोप्ला भएका त्रिकोण आकारमा रोज्नुपर्ने हुन्छ। प्रपोजपश्चात् शुद्ध साकाहारी त्यसमाथि पनि रस बढी भएका फल दुई हातले ख्वाइदिए आफ्नी प्रेमीको मन कोमल हुन्छ। डेटिङका लागि दूबो भएका बगंैचा तथा पहेंला रङ्गका फूल भएको ठाउँ रोज्नुपर्छ। डेटिङको बेला आफ्नो प्रेमीलाई थप प्रभावित तुल्याउने हो भने शिर अथवा निधारमा चुम्बन गर्न सकिन्छ।
नोटः धनुराशि भएका व्यक्तिले प्रपोज गर्दा आफ्ना हातखुट्टाका नङहरू काटेर सफा हुँदै दायाँ हातको नाडीमा पहंेलो धागो बाँधे बृहस्पति ग्रहको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
मकरः अस्थिर यो राशिका व्यक्तिका लागि मेष राशिका व्यक्ति सर्वोत्तम मानिन्छन्। त्यसबाहेक कन्या र कर्कट राशिसँगको सम्बन्धले पनि फरक पर्दैन। यो राशि भएका व्यक्तिले प्रपोज गर्दा रातिको समयमा पश्चिम दिशा फर्किएर कुरा घुमाउँदै प्रपोज गरे बोलीको प्रभाव बढ्नेछ।
भेटेर प्रपोज गर्ने हो भने कालो अथवा निलो रङ्गको वस्त्र कुइनासम्म ढाकिने गरी धारण गरी प्रपोज गरे त्यो अविस्मरणीय हुनेछ। यो राशिमाथि शनि ग्रहको राम्रो प्रभाव भएकाले गिफ्टका रूपमा इलेक्ट्रोनिक्स चीजहरू प्रयोग गर्दा बल आफ्नो पोल्टामा पर्न सक्छ। यस्तै भ्यालेन्टाइन कार्डहरूको प्रयोग गर्दा पनि इलेक्ट्रोनिक्समा आधारित बज्ने, बोल्ने खालका कार्डहरू वर्गाकार र आयताकार सेपमा रोज्नुपर्ने हुन्छ। प्रेमीलाई भोजन गराउने हो भने मेसिनबाट तयार भएका परिकारहरू ख्वाउनु राम्रो हुन्छ। डेटिङका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भएका स्थानजस्तै सपिङ्ग मल तथा विदेशका स्थानहरू रोज्नु उचित हुन्छ। कान नजिक चुम्बन गरे पे्रमको स्पर्श संगीत जस्तै हुनेछ।
नोटः प्रपोज गर्दा छालाजन्य वालेट तथा ब्यागहरूको प्रयोग नगर्नु नै उत्तम हुन्छ।
कुम्भः अलिकति अल्छी स्वाभाव भएको राशिका रूपमा चिनिने कुम्भ राशिले तुला राशिका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध गाँस्नु सुमधुर हुन्छ। यसबाहेक वृष र कर्कट राशि पनि कुम्भका लागि उपयुक्त हुन्छन्। यो राशि भएका व्यक्तिका लागि प्रपोजको समय राती हो। प्रपोज गर्दा नीलो रङ्गको वस्त्र धारण गरी आफ्नो प्रेमीलाई भेटेरै उत्तर फर्किएर सामान्य तरिकाले दायाँतर्फको कानमा सुटुक्क प्रपोज गरे मायाको गोप्यता रहन्छ। फागुन महिना कुम्भ राशिका लागि उत्कृष्ट हुने भएकाले भ्यालेन्टाइन डेमा प्रपोज गरे खेर जाँदैन। गिफ्टका रुपमा चारकुने ढुङ्गामा आफ्नो प्रेमीको नाम वा चित्र कोरेर प्रदान गर्न सके भ्याले न्टाइनको आयु वृद्धि हुन्छ। यसैगरी भ्यालेन्टाइन कार्ड किन्दा नीलो रङ्गमा धागो बेरिएको कार्ड किन्नु बुद्धिमानी हुन्छ। भ्यालेन्टाइन डेको दिन भोजन गराउँदा नन भेज आइटम पोले को, साँधेको रोज्नु नै मायाको असली स्वाद पाउनु बराबार हो। यो राशिका व्यक्तिले डेटिङ्ग स्पट रोज्नुपरे आफ्नो घरदेखि दक्षिण वा उत्तरतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। डेटिङमा कपास वा परालबाट तयार गरिएका चकटी वा गुन्द्री रोज्न सके आगामी दिनको यात्रा अटुट रहनेछ। चुम्बन गर्ने अवस्था आए प्रेमीको दायाँतर्फको गालामा सामान्य तरिकाले गर्दा डे टिङको रिजल्ट सकारात्मक रहन्छ।
नोटः यो राशि भएका व्यक्तिले राती पूर्वतर्फ सिरानी बनाई आफ्नो विलवेटको पासपोर्ट साइजको तस्बिर राखेको खण्डमा जीवनका अन्य सपना पनि पूरा हुनेछन्।
मीनः सोझो राशिका रूपमा चिनिने मीनको तुलासँग राम्रो सम्बन्धमा गाँसिन सक्छ। त्यसबाहेक मिथुन र कन्यासँगको सम्बन्ध पनि उपयुक्त हुन्छ। बिहान सूर्योदय अघि स्नान गरी पूर्व दिशामा फर्किएर जुनसुकै माध्यमबाट प्रपोज गरे त्यसको महत्व बेग्लै हुन्छ। यदि भेटेरै प्रपोज गर्ने हो भने निधारमा पहेंलो रंगको टीका लगाएर तथा पहेंलो वस्त्र धारण गरी नम्र स्वरमा प्रपोज गरे यो राशिका प्रेमीहरू आकषिर्त हुन्छन्। गिफ्टका रूपमा देवी -देवताका मूर्ति तथा सुन र तामाले बनेका औंठीहरू दिए दुई धड्कनको सम्बन्धले गति लिनेछ। यसैगरी भ्यालेन्टाइन कार्ड रोज्दा गोलाकार पहेलो रंग बढी प्रयोग भएको रोज्नुपर्ने हुन्छ। यो राशिको व्यक्तिले दूधबाट बनेका खानेकुराहरू जस्तै खीर भोजन गराउन सके प्रेम पवित्र रहनेछ। डेटिङ स्पटका लागि मन्दिरवरिपरिका क्षेत्र जहाँ धारा वा पानीका स्रोतहरू हुन्छन्। एक-अर्काको लाइफ स्टोरी सुनाए सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो राशिका व्यक्तिले डेटिङमा आफ्नो प्रेमीलाई किस गर्नु उपयुक्त मानिँदैन।
नोटः बृहस्पति ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव मीन राशिमा पर्ने हुँदा प्रेमीलाई भेट्न जाने क्रममा पानी भरिएको कलश वा एक्युरियमलाई दायाँ पारेर निस्कँदा साइत बन्छ।
« Reply #3 on: July 21, 2016, 01:19:30 AM »
सबै १२ राशीका स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । आप्mनो नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध कुन स्त्री या पुरुष सँग कस्तो रहन्छ ।
जुन मान्छेको राशी मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशी हुने हरु सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । मेष राशी हुने मानिसको लागि कुम्भ, तुला या मिथुन राशी हुने साथी सामान्य रहन्छन् । यीनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । वृष, कन्या या मकर राशी हुने मानिसकासँग मेष राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० रहन्छ । मेष राशी हुने मानिसको लागि वृश्चिक, मीन या कर्कट राशीका साथी उत्तम मानिँदैन । यीनीहरुका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफलहुने सम्भावना एकदम कम
वृष राशी हुने मानिसको लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी श्रेष्ठ हुन्छ । यीनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी वृष हो र उ कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी रोज्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जो मानिसको राशी वृष हो उनको लागि मेष, सिंह, या धनु राशीका व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० रहन्छ । वृष राशीका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशी हुनेहरूका साथ जोडी राम्रो मानिदैन ।
मिथुन राशीका मानिसका लागि मिथुन,तुला या कुम्भ राशीका साथी सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम नै रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी मिथुन हो र उ मेष, धनु या सिंह राशीका साथी छान्न चाहन्छ भने त्यो जोडी सामान्य रहनेछ । जुन मानिसको राशी मिथुन छ उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीको व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०&ndash;५० हुन्छ । मिथुन राशीका लागि वृष, कन्या या मकर राशीसँग जोडी राम्रो मानिदैन ।
धनु राशी हुने मानिसको लागि मेष, सिंह या धनु राशीका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी धनु हो र उ मिथुन, तुला या कुम्भ राशीका साथी बनाउन चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जुन मानिसको राशी धनु हो उसको लागि वृष, कन्या या मकर राशीको व्यक्तिको साथ प्रेम सम्बन्ध सफल हुने ५०&ndash;५० सम्भावना रहनेछ । धनु राशीका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशी हुनेहरुका सँगको जोडी त्यति राम्रो मानिदैन ।
जुन मानिसको राशी कर्कट हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीको साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम मानिन्छ । कर्कट राशीका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सामान्य हुन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन, तुला या कुम्भ राशीका मानिससँग कर्कट राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० रहन्छ । कर्कट राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशी हुनेहरु त्यति राम्रो मानिदैनन् । यिनीहरुको प्रेम प्रसंगको सफलताको सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ ।
सिंह राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशीका साथी उत्तम हुन्छ । यिनका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफल हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको राशी सिंह हो र उ मिथुन,तुला या कुम्भ राशीका साथीसँग मित्रता राख्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहने छ । जनु मानिसको राशी सिंह हो, उसको लागि वृष, कन्या या मकर राशी के व्यक्तिका साथ प्रेम सम्बन्ध हुने सम्भावना ५०&ndash;५० हुन्छ । सिंह राशीका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीसंगको जोडी त्यती राम्रो हुँदैन ।
जुन मानिसको राशी कन्या हो त्यो मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । कन्या राशीका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी सामान्य मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह र धनु राशीका मानिसका साथ कन्या राशीका प्रेम सम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०&ndash;५० रहन्छ । कर्कट राशीका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशीकासँगको मित्रता त्यति राम्रो मानिदैन । यिनीहरुको बीचको प्रेम सम्बन्ध पनि निकै कम हुन्छ ।
तुला राशीका मानिसका लागि मिथुन तुला या कुम्भ राशीका साथी सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ्न् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिका राशी तुला हो र उ मेष, सिंह या धनु राशीका साथी छनौट गर्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जुन मानिसको राशी तुला हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०&ndash;५० हुन्छ । तुला राशीका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथ जोडी बन्नु बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन ।
जुन मानिसको राशी वृश्चिक हो ति मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी उत्तम मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध सफल रहन्छ । वृश्चिक राशीका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सामान्य रहन्छ । यिनको प्रेमसम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला या कुम्भ राशीका मानिसका साथ कन्या राशीका प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०&ndash;५० रहन्छ । वृश्चिक राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशीसँगको मित्रता राम्रो हुँदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि कमै संभावना हुृन्छ ।
जुन मानिसको राशी मकर हो ती मानिसका लाथि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । मकर राशीका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी सामान्य रहन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह या धनु राशी का मानिसका साथ सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० रहन्छ । मकर राशीका मानिसक लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशी सँगकोे सम्बन्ध राम्रो मानिदैन । प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि एकदमै कम हुन्छ ।
कुम्भ राशी भएका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशीका साथी उत्तम मानिन्छन । यिनीहरूका बीचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशी कुम्भ हो भने मेष, सिंह या धनु राशीका साथी छनौट गरे यी साथीको जोडी सामान्य रहने छ । जुन मानिसको राशी कुम्भ हो उनको लागि कर्कट वृश्चिक या मीन राशीका व्यक्तिका साथ प्रेमसम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० प्रतिशत हुन्छ । कुम्भ राशीका लागि वृष, कन्या या मकर राशी हुनेहहरुको सम्बन्ध राम्रो मानिएको छैन ।
जुन मानिसको राशी मीन हो उसको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशीका साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम हुन्छ । मीन राशीका मानीसका लागि वृष, कन्या या मकर राशीका साथी सामान्य हुन्छ । यिनीहरुको प्रेम प्रसंग आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला र कुम्भ राशीका मानिसका साथ मीन राशीको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०&ndash;५० हुन्छ । मीन राशीका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशीका साथी त्यति उत्तम मानिदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलताको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
« Reply #4 on: July 21, 2016, 01:24:03 AM »
ज्योतिष : हरिहर अधिकारी
यो राशिको कन्या र तुला राशिसँगको सम्बन्ध उत्कृष्ठ हुन्छ । आफ्नो प्रेमसम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन यो वर्षभरीनै नीलो रंग प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेष राशिका लागि यो वर्ष प्रेमका दृष्टिले उत्कृष्ठ छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : कन्या
भ्यालेन्टाइन अंक : ९ र १
भ्यालेन्टाइन रंग : नीलो
यो भ्यालेन्टाइन वर्ष वृष राशिहरुका लागि त्यति अनुकूल देखिदैन । प्रेमसम्बन्धमा बाधाहरु सिर्जना हुने सम्भावना धेरै छ । मंगलबार र शुक्रबारको ब्रतले प्रेममा सुधार ल्याउन सक्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : कर्कट र तुला
भ्यालेन्टाइन अंक : १ र ७
भ्यालेन्टाइन रंग : पहेलो र हरियो
नयाँ प्रेमि प्रेमिकाहरुको साथ मिल्ने छ । यो वर्ष आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाह बन्धनमा गास्ने राम्रो अवसर छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : वृष
भ्यालेन्टाइन अंक : ९ र ३
भ्यालेन्टाइन रंग : हरियो
प्रेमसम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका बाधाहरु देखा पर्न सक्छन् । त्यसलाई हटाउन ३ मुखे रुद्राक्ष धारण गर्न सकिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : मीन
भ्यालेन्टाइन रंग : रातो
विवाहितहरुको प्रेमसम्बनध सुमधुर छ । तर, अविवाहित प्रेमसम्बन्धमा भने वियोग हुन सक्छ । जसलाई हटाउन शुक्रबार विहान ४, ५ बजेको अमृत समयमा मह सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : मेष र तुला
भ्यालेन्टाइन अंक : ७ र ५
भ्यालेन्टाइन रंग : पहेंलो, रातो
प्रेमसम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन शनिबारको दिन पीपलमा जल चढाउनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने शनिले प्रेममा बाधा खडा गर्न सक्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि&nbsp; : वृष, मिथुन
भ्यालेन्टाइन अंक&nbsp; : ९ र ५
भ्यालेन्टाइन : गुलाफी
तुला राशि भएकाहरुका लागि यो भ्यालेन्टाइन वर्ष प्रेमका दृष्टिले सकारात्मक छ । प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउने छ भने प्रेमी प्रेमिकाको सहयोगमा सफलता पनि प्राप्त हुने छ ।
भ्यालेन्टाइन अंक : ६ र १
भ्यालेन्टाइन रंग : सुन्तला
सम्बन्धमा अविश्वास बढ्ने छ । प्रेमी प्रेमिकाबीच धोकाको योग छ । स्थितिमा सुधारका लागि प्रेमी प्रेमिका दुबैले शुक्रबारको दिन पञ्चामृत सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : मकर
भ्यालेन्टाइन अंक : ७ र ८
भ्यालेन्टाइन रंग : सेतो, पहेरो
यो भ्यालेन्टाइन वर्षमा धनु राशि हुनेहरुको प्रेमसम्बन्ध उत्कृष्ट रहने छ । विवाहित र अविवाहित दुबै प्रेमसम्बन्धमा सफलताको योग छ ।&nbsp; शुक्र ग्रह राम्रो स्थानमा रहेको छ, जसले प्रेमसम्बन्धलाई सफल तुल्याउँछ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : मेष तथा सिंह
भ्यालेन्टाइन अंक : ३ र ५
भ्यालेन्टाइन रंग : रातो, सुन्तला
प्रेमसम्बन्ध सामान्य तरिकाले अघि बढ्ने छ । प्रेमी प्रेमिकाको सहयोगले वैदेशिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ, किनभने शनि ग्रह राशिमा सकारात्मक छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : मिथुन, तुला
भ्यालेन्टाइन अंक : ४ र ९
भ्यालेन्टाइन रंग : गाढा तथा रातो
कुम्भ राशि भएकाहरुका लागि यो भ्यालेन्टाइन वर्ष सबैभन्दा राम्रो छ । प्रेमसम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । आपसी सहयोगको भावना वागृत हुने छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि : कर्कट तथा तुला
भ्यालेन्टाइन हंक : १ र ५
भ्यालेन्टाइन रंग : नीलो तथा पहेलो
यो भ्यालेन्टाइन वर्ष त्यति राम्रो देखिँदैन । विछोडको योग पनि । प्रेमसम्बन्धलाई दीर्घजीवी तुल्याउन शुक्रबार शुद्ध रहँदा अर्थात व्रत बस्दा सफलता मिल्न सक्छ ।
भ्यालेन्टाइन राशि&nbsp; :&nbsp; सिंह तथा कन्या
भ्यालेन्टाइन अंक : ५ र ७
भ्यालेन्टाइन रंग : पहेंलो